Faa’iido Darrada Siigaysiga? | Gaaloos.com
Home » galmada » Faa’iido Darrada Siigaysiga?
Faa’iido Darrada Siigaysiga?
Haddii uu shakhsigu caadaystay inuu gacantiisa ku biya-baxo oo sidaas raaxo ku helo, haduu joojin waayo waxay sababtaa, kolkuu guursado in gacanta xabiibtiisa ee jidhkiisa salaaxaysa ku kacsan waayo, ama ka heli waayo mid u dhigma kacsigiisii gacanta.
Title: Faa’iido Darrada Siigaysiga?